Itoophiyaan marii hidha Hidhaa Haarmosaa Waashingitan irratti akka hin hirmaanne beeksifte - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan marii hidha Hidhaa Haarmosaa Waashingitan irratti akka hin hirmaanne beeksifte
26 Guraandhala 2020
Madda suuraa, ASHRAF SHAZLY
Ministira Bishaan, Jallisii fi Inarjii Dr Injinar Silashii Baqqalaa marii Kaartuum irratti
Itoophiyaan marii biyyoota sadanii - Itoophiyaa, Masiriifi Sudaan dhimma Hidhaa Haaromsaa Laga Abbayyaa Waashingitanitti Kamisaa fi Jimaata gaggeeffamuuf jiru irratti akka hin hirmaanne ibsame.
Mariin jaarsummaa Ameerikaafi Baankii Addunyaan kanaan dura jalqabame ture ammas marsaa biraatiif Guraandhala 27-28, Waashingitan DC'tti beellamamu illeen Ministeerri Bishaanii, Jallisiifi Inarjii Itoophiyaan akka hin hirmaanne beeksiseera.
Beellamni marii amma qabame kun isa dhumaafi kan walii galteerra gahama jedhamee eegame ture.
Ta'us ministeerichi dhimma Hidha Haaromsaa kana irratti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda mariisisee waan hin xumurreef hirmaachuu akka hin dandeenye beeksiseera.
Itoophiyaan marii beellamame kana irratti argamuu akka hin dandeenyes Ministeera Faayinsaansii/Maallaqaa Ameerikaatti himamuun isaa gabaafameera.
Kana duras mariiwwan akkaataa Hidhi Haaromsaa Abbayyaa ittiin bishaan guutamuufi gadi dhiifamuu qabu irratti mariiwwan gaggeeffaman walii galtee malee xumuramun isaanii ni yaadatama.
Haasaa dhimma Hidha Haaromsaa irratti mariin kallattii kaa'u taa'ame
Itoophiyaafi Masiriin Hidhaa Haaromsaarratti waliigaltee jalqabaarra ga'an
Mariin Hidha Haaromsaa ammas waliigaltee malee xumurame
Mariiwwan kana duraa walii galtee malee xumuramu isaaniin walqabsiisuunis guyyoota sagal dura Waajjira Ministeera Muummeetti korri tokko adeemsaafi kallattiin mariichaa maal akka ta'uu malu irratti qaamoolee dhimmichi ilaalattu waliin ta'aame ture.
Marii Waajira Ministeera Muummeetti gaggeeffamee ture sana irrattis ministiroonni, miseensonni koree marii Hidhaa Haaromsaa, hayyoonniifi namoonni bebbeekamoo fi bakka butoonni hawaasaa hirmaatanii turan.
Marii dhaabbilee sabaa himaaf banaa hin turre kana irratti, Itoophiyaan marii amma Waashingitanitti taa'amuuf karoorfame kana irratti akka hin hirmaanne murtaa'uun isaa wanti beekame hin jiru.
Mariiwwan jaarsummaa Ameerikaafi Baankii Addunyaatiin biyyoota sadan walitti fiduun gaggeeffamaa ture kun akka walii galtee malee xumuramuuf sababiin ejjennoofi qabxiin marii Masiriin dhiyeessitu yeroodhaa gara yerootti waan jijjiiramaa tureef ta'uun isaa eerameera.
BBC'n ogeessota marichatti dhiyeenya qaban irraa akka hubatetti, gama Itoophiyaatiin mariin akkaataa bishaan ittiin guutamuufi gadi dhiifamuu danda'urratti akka ta'uu qabu carraaqamus, Masiriin garuu dhimmi marichaa akka ga'ee bishaanii irratti xiyyeeffatuuf dhiibbaa gochaa turte.
Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbo Fitsum Araggaa fuula tiwiiteraafi Feesbuukii isaaniirratti akka barreessanitti, Itoophiyaan waliigaltee mirga bishaan Laga Abbayaatti fayyadamuu ishee dabarsee kennu kamiyyu hin raawwattu jedhan.
Hidha Haaromsaa: Haasaa dhimma Hidha Haaromsaa irratti mariin kallattii kaa'u taa'ame
17 Guraandhala 2020
Hidhaa Haaromsaa Itoophiyaa: Itoophiyaafi Masiriin dhimma bishaan guutuufi opereeshiniirratti waliigaltee jalqabaarra ga'an
16 Amajjii 2020
'Mariin hidha haaromsaa Washingitanitti taa'ama ture waliigaltee malee xumurame
Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma Hidha Haaromsaa irratti waliigalan
7 Sadaasa 2019
Hidhaa Haaromsaa Itoophiyaa: Waliigaltee Itoophiyaafi Masiriitiin eenyutu mo'ata?
Itoophiyaa, Masrii, Sudaan: Marii hidha haaromsaa 'waliigaltee malee waggoota afur'
16 Fuulbaana 2019
Manni Murtii Xilaahun Yaamiifaa irratti murtee adabbii laachuuf beellama biraa qabate
Waa'ee Olimpikii Tookiyoo 2020 gaaffilee keessaniif deebii
Ogeeyyii fayyaa 'waan guddaa eeganii waa xiqqoollee otoo hin argatiin hafan'
25 Adooleessa 2021
‘Miidiyaan haleellaa gosa haaraa as dhufaa jiruuf qophaa’uu qaba’ - Tsadaala Lammaa
22 Adooleessa 2021
'Qaroon Booranaa' Jaatanii Alii Tandhuu eenyu? Maaliif hanga ammaa leellifamu?
21 Adooleessa 2021
'Waggaa waggaan lafti keenya fudhatamaa jira' - horsiisee bultoota Karrayyuu
Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa EUn Sudaan akka balaaleeffatuuf gaafate
20 Adooleessa 2021
Dhageettiin Sirboota Afaan Oromoo YouTube irratti akkamiin wayyaa'uu eegale?
19 Adooleessa 2021
Waayinii Ruuniin suuraasaa miidiyaa hawwaasaa irraa poolisiitti gabaase
Badhaasa lammii Itoophiyaa jalqabaa 'rifaatuu' keessa galche
Mootummoonni naannolee Amaaraa fi Affaar uummanni finciltoota TPLF akka 'qolatu' gaafatan
'Waraana Tigraayiin daa'imman buqqa'aniif deeggarsi xiinsammuu kenname' - IOM
Shamarree Indiyaa huccuu jiinsii uffachusheetiif maatiidhaan ajjeefamte
Ogeeyyiin miidiyaa to'ataman Awaash Sabaat jiraachuu poolisiin ibse